Ogaden News Agency (ONA) – Bahweynta OYSU oo ku sii qulu-qulaya Oslo
Bahweynta OYSU oo ku sii qulu-qulaya Oslo
Oslo, 30-June-2011- Magaalada Oslo ee dalka Noway, waxaa ku soo qul-qulaya xubnaha ka qeyb-qaadanaya shirweynaha Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadeenya ee magacooda loo soo gaabiyo (OYSU), ee dalalka qaaradda Yurub. Shirweynahan ayaa waxaa marti gelinaya ururka OYSU, qeybtiisa Norway, oo sanadkan loo gartay inay qabtaan kulanka muhiimka ah oo la dhawrayo inay ka soo qeyb-qaataan boqolaal ka tirsan hawl-wadeenada iyo xubnaha ururka OYSU oo ka kala imanaya wadama Yurub.
Waxaana maanta duhurkii gagida diyaaradaha magaalada Oslo ee loo yaqaano Gardermoen Airport, soo caga dhigtay diyaaradii waday xubno fara badan oo ka soo kicitimaya dalka Netherland (Holland), oo ay hor kacaysay Xoghayeha ururka OYSU-Holland, Marwo Farhiya Abdi, oo loo sii qaaday goobtii loo diyaariyey inay dagaan waftigan dhalinyarada ah.
Shirweynahan oo socon doono maalmo ayaa la filayaa inuu bilaaban doono haddii ilaahay yidhaahdo maalinta jimcaha ah ee fooda inagu soo haysa, waxaana abaabul xoogan kujira sidii shirkani u noqon lahaa mid u dhaca qaabkii loogu talagalay gudiga qaban-qaabada shirka oo diyaarinaya siday u qaabili lahaayeen wufuuda ka qeyb-qaadanaysa shirweynaha, iyagoo diyaariyey dhamaan wixii looga baahnaa dhinacooda.
Waxaana la filayaa dhamaadka shirweynaha ururka OYSU ee qaarada Yurub inay ka soo baxaan go’aamo lagu diirsado oo dhaxalgal ah, taas oo wax badan ka badali doonta tayada iyo qaabka shaqada dhalinyarada ka tirsan ururka OYSU, oo mudadii uu jiray ururkan ku talaabsaday horumar aan la koobi karin oo ku saabsan dhinaca abaabulka, isku-xidhida dhalinyarad Soomaalida Ogadeenya ee dunida ku kala baahsan iyo wax u qabashada dadkooda ku hoos jira gumeysiga Itoobiya. Sidoo kale, gudiga qaban-qaabada shirweynaha ayaa sheegay inay filayaan in war-baahin dhawr ah ka soo qeyb-qaadan doonaan tabinta shirweynahan mudada uu socdo.
Waxaana haddii Alle idmo idiin soo gudbin doonaa warbixinada ku saabsan shirweynaha ururka OYSU mudada uu socdo iyo wararka ku saabsan oo dhan.